मोज़ाहरू कच्चा मालका लागि नायलन तान्न धागा 100d /2- चीन नायलॉन मोजा कच्चा माल आपूर्तिकर्ता को लागी धागा 100d / 2,कारखाना - ZLTT
मोज़ाहरू कच्चा मालका लागि नायलन तान्न धागा 100d / 2
67सेमी * cm 45 सेमी * .5१..5 सेमी(DTY)
15 दिन प्रति टन
निing्गो / शंघाई
प्यारामिटरहरू र चरित्र
कच्चा सेतो / कच्चा कालो / ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
Oeko-Text मानक 100
तेल सामग्री ：
2-4 % / ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
ब्रेकिंग शक्ति ：
3-4.5 Cn / dtex / ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
मोजा / होजरी / प्यान्टी-नली / सिमलेस अन्डरवियर / ग्लोभ / बुनेको स्वेटर कपडा / खेल पोशाक / ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
धेरै 10 उत्पादन र सेवा अनुभव को वर्षहरू। पेशेवर उत्पादन टेक्नोलोजी, गुणवत्ता व्यवस्थापन टोली, र कुशल र स्थिर औद्योगिक कामदारहरू।
हामी मुख्य रूपमा and Pa6 / Pa66 / Pet Pet FDY को उत्पादन र बिक्रीमा संलग्न छौं, POY, DTY, ढाकिएको धागा, रबर कभर यार्न, लाइक्र्रा कभर गरिएको धागो र कपडाका सबै प्रकारका लागि उच्च गुणस्तरको सामग्री प्रदान गर्दछ.
मोजे र गोलाकार मेसिनहरूमा अग्रणी कम्पनीहरू, संयुक्त रूपमा नयाँ उत्पाद विकास प्रमोट गर्दै, उद्योगको विकास प्रवृत्ति अग्रणी, र उद्योग मा एक राम्रो प्रतिष्ठा छ.
पीaraमीटर र चरित्र
रंग यार्न कृपया हाम्रो फ्याक्ट्री र color्ग कार्डमा सन्दर्भ गर्नुहोस्(ZHENGDAO),प्यान्टोन र color्ग कार्ड वा MIYAMA र card्ग कार्ड। यदि तपाईं अन्य रंगहरू चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई र color नमूना पठाउनुहोस्.
बिभिन्न कम्प्युटर मोनिटरहरूको असन्तुष्टि छ। त्यसोभए केवल एक तस्वीर पठाउनुहोस्, हामी जान्दैनौ कि तपाई कुन रंग चाहानुहुन्छ.
कृपया हाम्रो कारखानाको र color्ग कार्डमा सन्दर्भ गर्नुहोस्(ZHENGDAO), प्यानटोन रंग कार्ड वा MIYAMA रAMA्ग कार्ड। वा रंग सिम्पल हामीलाई सीधा पठाउनुहोस्.
1. Q ： के तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ??
A ： हामी ट्रेडिंग र निर्माण कम्पनी हो. हामी तपाईलाई हाम्रो देशको भ्रमण गर्न स्वागत गर्दछौं।
गुगल नक्शा स्थान हो (29.607289, 120.137993)
2. Q: के हामी नमूनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौं？
एक: हो, हामी ०.० सेमी मोटाईको लागि निःशुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्छौं, भाडा शुल्क तपाईं द्वारा भुक्तान गरिएको छ।
(1) तपाईं आफ्नोa/ c जस्तै DHL वा FEDEX वा TNT प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
(2) तपाईको कुरियरलाई हाम्रो अफिसमा लिन कल गर्न सक्नुहुन्छ।
(3) तपाईं हामीलाई Pal Pal द्वारा एक्सप्रेस चार्ज तिर्न सक्नुहुन्छ.
3. Q: प्याकेजि and र शिपिंग?
एक: प्रत्येक ट्यूबको लागि आन्तरिक प्लास्टिक झोला, बाहिरी दफ़्ती बक्सहरू, वा तपाइँको अनुरोध अनुसार.
DTY १D० डी / १ 144 एफ पॉलिस्टर बनावट धागो फिलामेन्ट यार्न ए & एए ग्रेड यार्न
तातो बिक्री /० / FF एफ लोचदार नायलन धागा
1207575 रबर कभर यार्न
70D / 24F /2100% महान प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु संग बुनाई को लागी नायलॉन यार्न